राजाराम पौडेल, असार २, २०७६
म संगीतप्रति इमान्दार मानिस हुँ जस्तो लाग्दैन, मैले जर्बजस्ती संगीत गरिरहेजस्तो लाग्छ, मेरो दिमागमा केही कुरा छन् जुन मैले भन्नुपर्ने छ, देखाउनु छ त्यसका लागि म संगीतलाई प्रयोग गरिरहेको छु । -प्रकाश सपूत पुरा पढ्नुहोस्
गायक राजेश पायल राईको स्वरमा नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । राईको स्वरमा ‘जय जय नेपाल’बोलको स्वदेशगान सार्वजनिक भएको हो । राईको स्वरमा रिलिज भएको सार्वजनिक गीत डा. अच्यूत शर्माले लेखेका हुन् । गीतमा खेम विश्वकर्माको संगीत रहेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएपछि चर्चामा आएको चिनियाँ टेक्नोलोजी कम्पनी हुवावेले हाल निर्माणाधीन आफ्नो कार्यालय परिसरको झलक सबैलाई देखाएको छ । उक्त विशाल परिसरको अधिकांश भाग युरोपेली सहरका प्रसिद्ध स्थलजस्तै गरी डिजाइन गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
विष्णु तारुके, असार २, २०७६
धादिङको आदमघाटमा जम्मा भएका सैयौं युवा–युवती त्रिशूलीमा तैरन आफूलाई कस्दै थिए । हातमा प्याडल, ज्यानमा लाइफ ज्याकेट, टोपीसहित सबै साहसिक जलयात्रा गर्न तम्सदै थिए । बर्खा सुरु नहुँदै बढेको त्रिशूलीको बहावमा तैरने आँट आफैंमा साहसिक हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
असार २० गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको चलचित्र ‘सानो मन’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । यसअघि सार्वजनिक चलचित्रमा समावेश ‘रानु कम्मर’ बोलको गीतले चर्चा बटुल्दै गर्दा निर्माण टिमले आइतबार प्रेम र रोमान्सले भरिएको ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो । पुरा पढ्नुहोस्
गुगलका अनुसार अभिनेता भुवन केसीको उमेर ६१ वर्ष भैसकेको छ । यो उमेरमा उनी दुलाहाको भेषभूषामा सजिए भने कस्तो देखिएला ? यो जिज्ञासाको जवाफ आइसकेको छ । अघिल्लो साता छायांकन प्रारम्भ गरिएको चलचित्र ‘मिस्टर नेपाली’ को पहिलो तस्बिर सार्वजनिक भएको छ, जसमा अभिनेता केसी दुलाहाको पहिरनमा छन् । पुरा पढ्नुहोस्
रामजी ज्ञवाली, असार २, २०७६
नेपालकी सर्वाधिक लोकप्रिय तथा महंगी गायिका विष्णु माझी मिडियामा सार्वजनिक हुने भएकी छिन् । हालै उनिहरु निकटका केहि व्यक्तिहरुका अनुसार माझीले र उनका श्रीमान सुन्दरमणी अधिकारीले चाडैँ मिडियामा आउने भएका हुन् । उनिहरु कसरी मिडियामा आउने छन् त्यो भने जानकारीमा आएको छैन । पुरा पढ्नुहोस्